Top 10 món quà 8-3 tặng cô giáo giúp bạn thể hiện lòng biết ơn | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 món quà 8-3 tặng cô giáo giúp bạn thể hiện lòng biết ơn | Muasalebang in Muasalebang
Izitsha 8-3 izipho othisha Yinto ekhombisa ukubonga nokubonga komfundi. Lapho bethola izipho, othisha bazozizwa bejabule kakhulu futhi bethintekile. Uma ufuna ukumnika isipho, nanka ukusikisela kwezipho ezinengqondo ongamnika zona kanye nezifiso ezihambisana nazo.
1 Izipho eziyi-15 ezibaluleke kakhulu eziwu-8-3 zothisha
1.4 Ama-Thermostats Amaphakathi
1.5 Umshini wokuwasha ubuso
1.6 izimonyo izimonyo
1.8 Indwangu ye-Ao dai
1.10 Incwadi yokubhalela
1.12 imbali entsha
1.14 Isiqeshana sezinwele
1.15 Ibhonsai efakwe etafuleni
2 Izilokotho ezinhle zothisha ngoMashi 8 – Izipho ezinenjongo zothisha ngoMashi 8!
2.1 Izifiso eziphusile kothisha
2.2 Ufisela uthisha omdala
Izipho eziyi-15 ezibaluleke kakhulu eziwu-8-3 zothisha
I-Lipstick iyisesekeli se-makeup esisebenziseka kalula kwabesifazane. Uma endaweni yesikole, nakuba uthisha egqoke izimonyo ezincane, i-lipstick encane isadingeka. Ngale nto encane, angayifaka esikhwameni sezincwadi azoyiletha emsebenzini noma asebenze ekuphumeni ngezimpelasonto, okunengqondo kakhulu. Lapho ukhetha umbala we-lipstick kuye, kufanele uhlakaniphe kancane futhi unake ithoni yesikhumba sikathisha ukuze ukhethe umbala ofanele we-lipstick.
Kodwa-ke, inketho engcono kakhulu yokuthenga i-lipstick ebomvu, ngoba le lipstick kulula ukuyisebenzisa futhi ayisoze yaphuma emfashini. Ngaphandle kwalokho, ungakhetha futhi ukumnika amafutha omlomo, indlela yokuba anakekele kahle izindebe zakhe ngezinsuku ezomile. Qaphela, lapho ukhetha isipho se-8/3 sikathisha wasenkulisa, akufanele ukhethe imibala ye-lipstick “ekhethekayo” kakhulu esikhumbeni sakho njenge-lotus pink, i-cherry ebomvu, i-earth orange, njll.
Phezulu kwezindebe zomlomo ezinhle kakhulu njengezipho zakhe
Amawashi ayizinsiza eziphusile futhi afaneleka njengezipho zoSuku Lwamazwe Ngamazwe Lwabesifazane 8/3. Ngokunikeza iwashi, ungazwakalisa ukubonga kwakho okuqotho kuthisha okufundise, wakuthanda futhi wakukhathalela esikhathini esidlule.
Ngaphandle kwalokho, iwashi liphinde libe isisetshenziswa esishintshashintshayo kokubili esidala ukugqama lapho sihlanganiswa nezinhlobonhlobo zezingubo futhi sinomsebenzi wokugcina isikhathi. Ngaphezu kwalokho, amamodeli amaningi ewashi esimanje nawo ahlanganiswe nemisebenzi ewusizo.
Khetha ukuthenga amawashi amahle e-TGDD
Cishe bonke abesifazane banothando olukhethekile ngesipho sezikhwama zezincwadi. Ngoba iyisesekeli sefashini esibalulekile esithuthukisa ubuhle besifazane kanye nesizotha kwabesifazane Ngakho-ke, kufanele ubheke izikhwama zobukhulu obufanele, impahla yesikhumba efanelekile. Ngaphezu kwalokho, abantu abasishayi indiva isiteji sokukhetha imibala emihle, elula futhi ethambile ukuze baxhumanise nezingubo eziningi ezahlukene. Lokhu kukhetha okukhethwe ngokukhethekile kuzojabulisa othisha, kusetshenziswe njalo.
Khetha ukuthenga izikhwama zemfashini kuLazada
Khetha ukuthenga izikhwama zemfashini kwaShopee
Ukuba uthisha kuwumsebenzi odinga ukuxhumana njalo, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuphuza inani elidingekayo lamanzi emzimbeni. Ibhodlela le-thermos liyisipho esisebenziseka kakhulu nesihlakaniphile kuye ngoSuku Lwamazwe Ngamazwe Lwabesifazane.
Isipho sibonisa ukuthi uyayikhathalela impilo kathisha. Ngaphezu kwalokho, i-thermos nayo iguquguquka kakhulu, othisha bangayisebenzisa ukulungisa iziphuzo ezishisayo nezibandayo njengetiye, ikhofi, ama-smoothies, …
Khetha ukuthenga i-thermos ku-Lazada
Khetha ukuthenga i-thermos ku-Shopee
Umshini wokuwasha ubuso
Njengothisha, kufanele abhekane nothuli oluningi lukashoki. Ngesikhathi esifanayo, ngenxa yokuba matasa komsebenzi wokufundisa, abanaso isikhathi sokuzithuthukisa. Ngakho-ke, unganikeza umshini wokuwasha ukuze ukhumbuze uthisha wakho ukuthi azinakekele futhi ikakhulukazi ukukhombisa ukunakekela kwakho okuthambile kuye.
Khetha ukuthenga umshini wokuwasha eLazada
Ngomsebenzi othile, othisha besifazane abanaso isikhathi esiningi sokuzithuthukisa. Ngakho-ke, abantu bangabanxephezela ngesethi yokwenza izimonyo ukuze baphume, ukuya ephathini kuyoba yisinqumo esihle kakhulu. Ungacela iseluleko kubasebenzi, uzikhethele umugqa womkhiqizo okulula ukuwusebenzisa nodumile ukuze ugweme ukungafaneleki. Lapho ethola lesi sipho, nakanjani uzothinteka kakhulu, aziqhenye futhi azinikele kakhulu emsebenzini.
Khetha ukuthenga izimonyo zangempela kuLazada
I-Perfume ihlezi iphezulu kwezipho ezithengwa kakhulu nezinikezwe kakhulu ngoMashi 8. Ngoba kuzonikeza abesifazane ubuhle nokuzethemba lapho behamba emgwaqeni. Ngakho-ke, udinga ukukhetha ngobuhlakani ibhodlela lamakha elinephunga elilula, elimnandi ukuze lihambisane nomamukeli. Ukukhetha iphunga elimnandi elithandwa uthisha wakho kunomthelela ekuboniseni ukuthi ungumuntu othambile ohlale ekwazi ukubamba nokuqonda abantu.
Khetha ukuthenga amakha angempela eLazada
I-TOP 14 I-BRAND AYITHANDAYO YOKUSEBENZA KWABESIFAZANE NJENGAMANJE
Indwangu ye-Ao dai
Indwangu yokwenza i-Ao Dai isipho esidume kakhulu se-8-3 sothisha namuhla. Umfaniswano wothisha waseVietnam uhlala uyi-Ao Dai yendabuko. Indwangu yokwenza i-Ao Dai iyinto edingeka kakhulu futhi ehlotshaniswa nokufundisa kwansuku zonke kukathisha.
IKHELI LOKUNIKEZA I-Ao Dai YAMI
Kufanele ukhethe iphethini nombala we-Ao Dai ngokuhambisana neminyaka kathisha. Khetha imibala emisha njengophinki, ophuzi, osawolintshi,…nothisha abasebasha. Kufanele ukhethe i-ao dai enemibala ejulile efana nokunsomi, okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, onsundu, … uma njengezipho 8-3 zothisha abadala. Umbala we-Ao Dai ulungele iqembu leminyaka futhi udala ubuhle nokuvumelana. Ngesikhathi esifanayo, kuzokwenza umemukeli azizwe aziswa kakhulu.
Endlini yanoma yimuphi uthisha kunezincwadi. Ngoba umsebenzi wokufundisa uhlotshaniswa namagama nezincwadi. Ukusebenzisa izincwadi njengezipho ezingu-8-3 zothisha kuwukukhetha okunengqondo.
Kuye ngesifundo sokufundisa kukathisha, khetha ukuthi uzothenga luphi uhlobo lwencwadi. Iningi lothisha bemibhalo lizithanda kakhulu izincwadi zethiyori yemibhalo njenge-A Age in Poetry, Thoughts on Poetry, njll Futhi othisha bezibalo bathanda izincwadi ezihlanganisa imibuzo yesivivinyo noma izinkinga ezinhlanu. Unga-oda ku-Fahasa ungaxhunyiwe ku-inthanethi! I-Fahasa inesevisi yokugoqa izipho, ngakho-ke ilula kakhulu.
Uma ama-notebooks esikhathini esidlule ayemane nje ayincwajana yokurekhoda amanothi, namuhla ama-notebook ahlotshiswe ngobuciko kakhulu ngezipho. Ikhasi ngalinye lihlotshiswe ngemidwebo emihle. Kwesinye isikhathi kuba khona izingcaphuno ezikhuthazayo zosaziwayo bomhlaba. Lesi isipho sikathisha esiphusile nesisha kakhulu.
IBST ENCWADANA KAKHULU YOKUNOBHALA KU-SHOPEE
Lesi sipho sanele ukumangaza futhi senze uthisha wakho azizwe ethintekile. I-notebook iyinto ebalulekile noma yimuphi uthisha anayo. Kamuva, njalo lapho bevula le ncwadi, bayohlale bekhumbula umfundi othandekayo owabanika leyo ncwadi.
Uma ufuna ukunikeza isipho esingu-8-3 kuthisha wakho omdala owakufundisa eminyakeni eminingi edlule, kufanele ukhethe ipeni lomthombo njengesipho. Ngoba eminyakeni eminingi edlule babesebenzisa ama-fountain pen ukuze bakulinganise. Futhi usebenzise ipeni elifanayo ukukufundisa ukubhala igama negama. Nakuba singasalisebenzisi leli peni namuhla, othisha abaningi basenomkhuba wokusebenzisa leli peni. Othisha bazozizwa bejabule kakhulu lapho bethola isipho esigcwele izinkumbulo zakudala zomfundi ngamunye omdala ngeminyaka eminingi ngokuhlukana.
ODA ISIGQUGQUZELI SEZINTENGO ESIZIHLE KAKHULU BHALA LAPHA
Lesi yisipho sika-8-3 sikathisha esinencazelo ejulile. Amarozi awagcini nje ngokubonisa uthando kodwa futhi abonisa ukubonga kothisha bawo. NgoSuku Lwabesifazane Lwamazwe Ngamazwe, uma uthisha ethola isixha sezimbali ezintsha, uzothinteka.
Ngaphandle kwezigqoko, amajazi, nezifihla-buso, izikhafu ziyizinto ezijwayelekile ezidingwa othisha lapho bephuma. Ungasebenzisa lesi sikhafu njengesipho sama-8-3 sikathisha wakho. Khona-ke isipho sizoba isivikelo sempilo yakhe ekungajwayelekile kwesimo sezulu.
Iqoqo le-SILK shawl lothisha
Emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezikhafu ezintweni ezihlukene nemibala. Kufanele isekelwe izintandokazi zakhe ukukhetha umbala ithawula. Ngo-March, isimo sezulu asibanda kakhulu, ngakho-ke ungakwazi ukunikeza amathawula e-chiffon, amathawula e-velvet ukusiza uthisha avikele intamo yakhe elangeni elishisayo nothuli. Isikhafu soboya singanikezwa ukuze asisebenzise ngenkathi ebandayo.
Amaphini ezinwele yizinto abesifazane bebonke kanye nothisha abazithandayo kakhulu. Lona wesifazane othanda ukwenza izinwele zibe zinhle. Nakuba lokhu kuwubucwebe nje bezinwele ezincane, kufanelekile kakhulu njengesipho se-8-3 sikathisha.
AMABREKI AMATSHE AMAHLE AKUKHO
Izinwele zezinwele zihlotshiswe ngendwangu ukuze zenze ubuhle be-rustic nobulula. Izikhonkwane zezinwele zensimbi ziveza ubuhle nokunethezeka. Uma uthisha wakho esemncane kufanele uthenge izikhonkwane zezinwele ezinemibala egqamile. Uma uthisha emdala, kufanele ukhethe umbala ojulile. Isipho sihambisana neminyaka futhi sibenza baneliseke kakhulu.
Ibhonsai efakwe etafuleni
Isithombe sesitshalo esinebhodwe elincane esivela etafuleni likathisha cishe sijwayeleke kakhulu kubafundi. Khona-ke kungani ungasebenzisi le nto evamile njengesipho sika-8-3 sikathisha wakho? Izinhlobo zezitshalo zokuhlobisa kufanele zisetshenziswe njengezipho zokuvula i-honeysuckle, i-jade, inaliti yemali, i-lotus yamatshe, … Lezi zitshalo zikhula kalula futhi zihloselwe ukuletha izibusiso kumlimi.
Izilokotho ezinhle zothisha ngoMashi 8 – Izipho ezinenjongo zothisha ngoMashi 8!
Izifiso eziphusile kothisha
1. Ngesikhathi soSuku Lwabesifazane Lwamazwe Ngamazwe, ngifisa sengathi niphile kahle futhi nijabule, zonke izinsuku zigcwele injabulo.
2. Ngithanda ukubonga ukuthi uhlale usifundisa ukuba ngabantu. Ngenhliziyo yami yonke, ngifisa sengathi uphumelele njalo ekufundiseni futhi uhlale ujabule nabathandekayo bakho.
3. Angiqali ukuthengela uthisha wami izipho ezingu-8-3, kodwa ngiyaqala ngqa ukuzenzela. Ngethemba ukuthi uzosithanda lesi sipho. Kwangathi ungahlala ungowesifazane ojabule kakhulu futhi ojabula kakhulu.
4. Ngifuna ukusho into eyodwa ukuthi ngikuthanda futhi ngiyakuhlonipha ngempela. Nsuku zonke ngiyohlale ngithandazela ukuthi uNkulunkulu akubusise. Ngethemba ukuthi uyaphila futhi unempilo.
5. Ngifisela uthisha wami nomndeni wakhe impumelelo njalo emsebenzini, injabulo nokuzwana emndenini futhi bahlale benempilo futhi bejabule.
6. Lesi sipho sika-8-3 salo thisha asibizi kodwa siqukethe yonke inhliziyo yami. Sithemba ukuthi uyasijabulela lesi sipho esincane esilula. Ngifisa ukunifisela impilo enhle, ukuthula nempumelelo emsebenzini wokukhulisa ulwazi lwezizukulwane ezizayo.
7. Namuhla usuku olukhethekile lwabesifazane, ngakho ngifuna ukunikeza uthisha wami uthando olukhethekile. Ngifisa ukuthi ahlale engowesifazane omuhle futhi ojabule kunabo bonke.
8. Nkosazana, ungasisebenzeli kanzima. Siyathembisa ukuthi sizohlale sifunda kanzima. Sikufisela usuku oluhle nolugculisayo lwamazwe ngamazwe lwabesifazane.
9. Ngomhla ziyisi-8 kuNdasa, ngifisa sengathi nihlale ninempilo enhle, nihlale ninezinzuzo emsebenzini nasempilweni.
10. Yazini, ufana nomama wesibili enganeni yakho. Ngiyabonga, ngiyabonga ngokungibekezelela njalo nokungifundisa. Usuku oluhle lwabesifazane!
Ufisela uthisha omdala
1. Nakuba ngidlule ezintweni eziningi, angisoze ngakhohlwa izifundo owangifundisa zona. Namuhla ngesikhathi soSuku Lwabesifazane Lwamazwe Ngamazwe, ngithanda ukukuthumelela izilokotho zami ezifiselekayo zempilo ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngikufisela impilo enhle njalo.
2. Ngithanda ukubonga “Umshayeli wami weFerry”, ozinikele ekuletheni abafundi emfuleni wolwazi iminyaka eminingi. Ngikufisela njalo ukuzuza impumelelo enkulu emsebenzini wakho wobuhlakani bokudoba ngezikebhe.
3. Lesi sipho sika-8-3 salo thisha siqukethe konke ukubonga nenhlonipho yalo mfundi wangaphambili. Ngethemba ukuthi uzokujabulela ukubona leso sipho.
4. Ngisalukhumbula lolu suku eminyakeni eminingi edlule lapho ngimnikeza izifiso zami eziqotho. Nakuba sekudlule iminyaka eminingi, ukubonga kwami ​​okuqotho kusefana nanamuhla. Fisela ukuthi uhlale unempilo enhle futhi uhlale ufinyelela lokho okufisayo.
5. Enginakho namuhla ngibonga kakhulu ekukhuleni kwakho esikhathini esedlule. Sikufisela uMashi 8 omuhle nonelisayo.
6. Noma usungifundise iminyaka eminingi, angisoze ngakukhohlwa ukuzinikela kwakho ekufundiseni. Uzoba umama wami wesibili kuze kube phakade. Usuku oluhle lwabesifazane!
7. Siyabonga ngokuzinikela kwakhe ekuvikeleni nasekufundiseni. Ukufaneleka kwakhe kwasezulwini, ngisho nasempilweni yami, angisoze ngakukhohlwa. Lo owayengumfundi wakhe umfisela injabulo nohleko empilweni yakhe yonke.
8. Lesi sipho sakhe wasenzelwa umfundi wakhe wangaphambili. Ngethemba ukuthi uyayithanda futhi uyakuqonda ukubonga kwami ​​kuwe.
9. Noma ngiyile emsebenzini manje, ngeke ngimkhohlwe uthisha owangifundisa emandulo. Lo owayengumfundi usamthanda futhi emhlonipha njengomama wakhe wesibili.
10. Nkosazana, ungasebenzi kanzima. Namuhla u-March 8, usuku olunikezelwe kuye. Sithemba ukuthi uzolujabulela ngokugcwele usuku lwakho olukhethekile.
Nazi izitsha 8-3 izipho othisha ongabhekisela kukho. Ungakhohlwa ukubapha izipho ngezifiso zakho ezinhle!